Shiinaha birta cas cas 110/120/130/180/190 soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Midabka Shencai
Midabka oksaydhka birta ah
Chrome oksaydh cagaaran
birta xabagta cas 110/120/130/180/190
MUUQAAL: budo liin-casaan ah oo buluug-guduud ah oo trigonal ah. Labadaba dabiici iyo synthetic. Midka dabiiciga ah waxaa lagu magacaabaa Saffron wuxuuna leeyahay cufnaan dhan 55.25. FILINTA 0.4 ~ 20um. Barta Barbaarta 1565. Markii la gubo, ogsijiinta waa la siidaayaa waxaana loo yareyn karaa birta hydrogen iyo-carbon dioxide. Kalama milmi karo biyaha, ku milmi kara hydrochloric acid, sulfuric acid, xoogaa ku milmi kara nitric acid iyo khamiir. Waxay leedahay iska caabin iftiin aad u fiican, caabbinta heerkulka sare, caabbinta aashitada, iska caabinta Alkali iyo u adkeysiga miridhku. Fiditaan wanaagsan, midabeyn xoog leh iyo awood qarin, malahan saliid bixin iyo biyo marin. Aan sun ahayn. Xaddiga ugu badan ee la oggol yahay ee hawadu waa 5 mg / M 3.
1. Warshadaha qalabka dhismaha, waxaa inta badan loo isticmaalaa midabada sibidhka, midabada midabada sibidhka ah, midabada sibidhka midabada ah, lebenka muraayadda muraayadda leh, lebenka dhagaxa shubka ah, madaafiic midab leh, laamiga midabka, terrazzo, dusha sare ee mosaic, marmar macmal ah iyo darbiga STUCCO, IWM 2. Waxaa loo adeegsadaa midabaynta iyo ilaalinta waxyaalaha la mariyo ee kala duwan, oo ay ku jiraan biyo-ku-saleynta gudaha iyo gidaarka Dibedda, maaddada budada ah, iwm. Sidoo kale waxay ku habboon tahay astaamaha saliidda ku saleysan iyo dusha sare ee ay ka midka yihiin epoxy, alkyd, Amino, iwm. Iron Red Primer waa beddelka miridhku u adkaysto rinjiga cas ee qaaliga ah, keydinta biraha aan birta ahayn. 3. Midabaynta badeecooyinka caagga ah, sida polymer-ka heer-kulmeedka iyo Thermoplastic, iyo alaabada caagga ah, sida tuubbada gudaha ee gaariga, tuubbada gudaha ee diyaaradda, tuubbada gudaha ee baaskiilka, iwm. 4, oo loogu talagalay qalabka wax lagu shiido ee heerka sare ah, oo loo isticmaalo qalabka qalabka saxda ah, muraayadda muraayadda indhaha. Nadiifinta sare ee metallurgy Powder waa waxyaabaha aasaasiga ah ee aasaasiga ah ee soo saarida aaladaha magnetic kala duwan iyo biraha kale ee daawaha ah. Waxaa laga sameeyaa birta (2+) sulfate (anhydrous) ama iron oxide huruud ah ama macdanta salka ku leh calcination heerkulka sareeya ama si toos ah uga yimaada dhexdhexaad dareeraha.
25 kg / bac warqad farshaxan ah, 25MT / 20FCL (Iron Oxide Red);
25 kg / bac warqad farshaxan ah, 12-14MT / 20'FCL (Yellow Iron Oxide);
25 kg / bac warqad farshaxan ah, 25MT / 20'FCL (Iron Oxide Black)
25 kg / bacda warqadda farsamada gacanta, 25MT / 20'FCL (Cagaarka cagaaran ee oksaydhka)
25 kg / boorso warqad farshaxan ah, 25MT / 20'FCL (Iron oxide buluug)
25 kg / bac warqad farshaxan ah, 25MT / 20'FCL (Iron Oxide Brown)
25 kg / bac warqad farshaxan ah, 25MT / 20'FCL (Iron Oxyide Orange)
1. Aqbal baaritaanka SGS, CCIC iyo waaxda kale ee kormeerka caalamiga ah.
2.Shamballo bilaash ah ayaa laguu soo diri doonaa.
3.14 sano oo khibrad ah.
SHENMING ferric oxide pigments midab dabiici ah, iron oxide cas cas oo lagu suuq geeyo noocyada wax soo saarka "SHENMING" ayaa laga heli karaa Casaanka, Jaalaha, Madowga, Cagaarka, buniga, oranjiga, buluuga.
"SHENMING" brand synthetic pigment pigment iron oxide red 130 wuxuu ku raaxeeyaa sumcadda suuqa sare wax soo saarka si fiican ayaa loogu iibiyaa dalka oo dhan.
CCIC, CIQ, BV, kormeerka SGS waa la aqbali karaa, iyo sidoo kale adeeg muunad bilaash ah.
Sannadihii ugu dambeeyay, saamiga loo dhoofiyo Koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe, Koonfurta Aasiya, Koonfurta Ameerika, Afrika, Ruushka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sii kordheysa oo tayada wax soo saarka iyo sumcadda ay heshay ammaan joogto ah.
Haddii aad xiiseyneyso inaad ka iibsato midab tayo sare leh midabka birta leh midabka casaanka ah ee laga helo Shiinaha 130, SHIJIAZHUANG SHENCAI PIGMENT FACTORY ayaa ah doorashadaada ugu fiican.
Waxaan leenahay waayo-aragnimo 17 sano ah oo ku saabsan midabyada. Waxaan diyaar u nahay inaan ku siino adeeg tayo sare leh, adeeg aad u fiican.
Magaca Ganacsiga KHUDBADDA BADAN EE GUDAHA
Foomka gaarsiinta Budada
Tusmada midabka Midabka casaanka 101 (77491)
CAS Maya / lambar No. 1309-37-1 / 215-168-2
Sooc Tusmada (Fe2O3) % ≥95
Nuugista saliida ml / 100g 15 ~ 25
Res On 325 mesh % .30.3
Cusbada biyaha ku milma % .30.3
qoyaan % ≤1.0
qiimaha pH 5 ~ 7
Culeys gaar ah g / cm3 5.0
Awood taabashada (marka loo barbar dhigo heerka) % 95 ~ 105
Farqiga midabka ∆E (marka loo eego heerka) ≤1.0
Xirmooyinka iibka Bacda 25kg / 1000kg bacda bulk ka dibna palletized
Gaadiidka & keydinta Ka ilaali cimilada / keydinta meel qalalan
Amniga Shayga looma aqoonsana inuu yahay mid khatar ku ah EC 1907/2006 & EC 1272/2008
Xiga: birta xabagta huruud ah 311/313/920
Iron oxide cirro
Iron oxide madow 722/750
Macdanta birta ah bunni 600/610/663/686
Birta xabagta birta ah
Macdanta birta cagaaran 5605/835
Tuulada Guzhuang, Shangzhuang Town, Luquan Zone, Shijiazhuang, Hebei, Shiinaha